SHENZHEN KING OF SUN INDUSTRY CO.,LTD [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer , Trade Company အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , Other Markets , West Europe , North Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:81% - 90% Cert:ISO9001, CE, Test Report ဖေါ်ပြချက်:Urial Flush Valve ကိုလက်ဖြင့်ဖိပါ,Button-type Urinal Flushing Valve,မြို့ရိုးအ Urinal Flush Valve ကိုတပ်ဆင်ထားသည်
Home > ထုတ်ကုန်များ > Flush Valve > Urinal Flush Valve > ကြေးဝါခရိုမီယံနံရံတွင်တပ်ဆင်ထားသည့်လက်နှိပ်နှိပ် Urinal Flush Valve
Handy ၏ Button-type Urinal Flush Valve သည်နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်းကိုစာနယ်ဇင်းစမ်းသပ်မှုပေါင်းတစ်သန်းကျော်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ urinal တိုးခြင်းနှင့် thickening ကြေးနီအဆို့ရှင်နှင့်အခွံမာသီး အတွက် Manual Flush Valve သည် ချောချောမွေ့မွေ့မြန်ဆန်စွာဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီးသက်တမ်းပိုရှည်သည်။
Handy's Wall Mounted Urinal Flush Valve ၏အဓိကကိုယ်ထည်သည်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးကျန်းမာသောကြေးဝါဆွဲအားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးကြာရှည်ခံသည်။ S-shaped ပြွန်သည်ချောမွေ့သောလိုင်းများရှိသည်။ ယနေ့ရေအရင်းအမြစ်များကိုပိုမိုတန်ဖိုးထားလာပြီးအကာအကွယ်ပေးသည့်အခါကမ္ဘာတစ်လွှားရှိသန်းပေါင်းများစွာသောလူများအတွက်စိမ်းလန်းစိုပြေသော၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းသောနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောရေဖြေရှင်းနည်းများကို Handy ကပေးအပ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
Urinal Flushing System Flush Valves ၏ဖော်ပြချက်
အမည် - ကြေးဝါခရိုမီယံနံရံတွင်တပ်ဆင်ထားသည့်လက်နှိပ်နှိပ် Urinal Flush Valve
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ။ : HN-7G14-1
လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များ - အိမ်တွင်း Urinal Flush valve, Commercial Urinal flush valve, ချိတ်ဆွဲထားသောအိမ်သာ၊ Public Toilet Flush Valves
1) ရွှံ့သို့မဟုတ်သဲစသည်တို့မပြုမီကဒီအီး install ကဲ့သို့ပိုက်၏အတွင်းပိုင်းသန့်ရှင်းရေးကို ကျေးဇူးပြု. ဦး rinal flush အဆို့ရှင် xposed ။
ဖြေ။ ။ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ နမူနာ3မှ5ရက်အတွင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ကောင်းမွန်သောပစ္စည်းများနှင့် Eco-friendly faucets - faucets အားလုံးသည် ၅၉-၁ ကြေးဝါ၊ တာရှည်ခံပစ္စတင်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးအဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောနည်းပညာ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးကိုပိုမိုအထောက်အကူပြုသည်။
2. လေဆာ LOGO ကို faucet ၏လက်ကိုင်သို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်တင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြားနေအရောင်အကွက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တံဆိပ်ပုံနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ် DIY packing / blister package နှင့်ကပ်ထားသည့်ထုတ်ကုန်များတံဆိပ်ကပ်ပါ။ DIY package အတွက် MOQ သည် ၁၀၀၀ ယူနစ်ဖြစ်သည်။
၃။ လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်ခြင်း - တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည့်ဟာ့ဒ်ဝဲအားလုံးသည်ယူနစ်သေတ္တာတိုင်းနှင့်အတူ faucet၊ တပ်ဆင်ခြင်းညွှန်ကြားချက်များပါဝင်သည်။
4. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ ၁၀၀% ကိုတင်ပို့ခြင်းမပြုမီစမ်းသပ်စစ်ဆေးသည်။ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမရှိပါ။
၅ ရက်မှ ၇ ရက်အတွင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။
မြို့ရိုးအ Urinal Flush Valve ကိုတပ်ဆင်ထားသည်
Flush Valve ကိုလက်ဖြင့်ဖိပါ
Flush Valves များကိုလက်ဖြင့်နှိပ်ပါ